ကွန်ပျူတာများနှင့်အင်တာနက် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Power Bank - ဒါဘာလဲ။ Hiper ပါဝါဘဏ်
အပေါ် Posted 15.09.2019 08.01.2020
ကိရိယာများဖြင့်တက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ဘက်ထရီကိုလျင်မြန်စွာယိုစီးစေသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချိန်မှာလူအတော်များများဟာဘက်ထရီတွေကုန်သွားပြီ။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Outlet (သို့) charger ကိုအမြဲတမ်းသုံးလို့မရပါဘူး။ ဘယ်လိုလဲ ...
အပေါ် Posted 15.09.2019 01.11.2019
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်သည်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့ရသည် - လက်ဖြင့်ရေးသောစာသားကိုဒီဂျစ်တယ်ပုံစံသို့ဘာသာပြန်ရန်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်လည်းဒီအလုပ်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းသည်သက်ဆိုင်သည်။
Minecraft ဓားများ။ Minecraft မှာဓားတစ်ချောင်းကိုဘယ်လိုစွမ်းနိုင်သလဲ
အပေါ် Posted 15.09.2019 15.10.2019
သင် Minecraft လောကတွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည့်အခါသင်၌လုံးဝဘာမျှမရှိပါ။ သင်၏ပထမဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုသင်၏ရှင်းလင်းသောလက်များဖြင့်ရယူရန်နှင့်သူတို့၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ပထမဆုံးပစ္စည်းများကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ရလဒ်အတွက်ကစား, ဒါမှမဟုတ် The Sims-3 အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုပိတ်ထားဖို့ဘယ်လို?
အပေါ် Posted 15.09.2019 02.11.2019
လူတွေဘာကိုလိုချင်တာလဲ။ ဤမေးခွန်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြေဆိုနိုင်သော်လည်းမည်သည့်အဖြေကမပြည့်စုံသေးပါသနည်း။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ထိုသို့လား? မဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုံရည်မှန်းချက်များကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွန်းနေလို့ပါ။
Aliexpress အပေါ်ကူပွန်ကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လို: ဝယ်ယူမှုများအတွက်ညွှန်ကြားချက်
အပေါ် Posted 15.09.2019 14.12.2019
Aliexpress ကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအကြောင်းသိသူတိုင်းသည် ၀ ယ်ယူမှုတွင်များစွာသက်သာနိုင်သည်။ ဒီတရုတ် site ရှိထုတ်ကုန်များစွာအတွက်စျေးနှုန်းများသည်စျေးကွက်ပေါက်စျေးထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။ များစွာသော ...
"စုန်းမ 3": လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်။ "Count Royven ၏ရတနာများ", ပုံပြင်ရှာပုံတော်
Witcher3သည်လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေသည့် RPG ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စီမံကိန်း၏ပထမနှင့်ဒုတိယအပိုင်းများသည်လက်ရာမြောက်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်တတိယမြောက်မှာပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးကစားသမားအားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ပေးသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် teletype ကဘာလဲ?
အပေါ် Posted 15.09.2019 02.10.2019
အချို့ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်ချိန်ညှိချက်များသို့တည့်တည့် ဝင်၍ နားမလည်သော TTY အတိုကောက်သို့မဟုတ် "Teletype mode" ကိုတွေ့သည်။ စမတ်ဖုန်း၏ status bar တွင်ဝိသေသလက္ခဏာရှိသောအိုင်ကွန်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ဖုန်းပေါ်မှာ TTY ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာအတွက်လဲ…
ကွန်ပျူတာမှာ Google Chrome ကို Install လုပ်နည်း အစပြုသူများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ
အပေါ် Posted 15.09.2019 25.09.2019
သင်အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်၊ သို့သော်ယနေ့သုံးစွဲသူများအားလုံးက Google Chrome အားမည်သို့ကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ရမည်ကိုမသိကြပါ၊
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်များနှင့် Crysis3၏ system ကိုလိုအပ်ချက်များကို
အပေါ် Posted 15.09.2019 10.10.2019
Crysis ။ ဒီစကားလုံးဟာသေနတ်သမားရဲ့အမည်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကအမြဲတမ်း "အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်" အမျိုးအစားအတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်ခေါင်းစဉ်ကိုလက်ခံရရှိ။ အပိုင်းအသစ်တစ်ခုစီသည်လူတိုင်းလမ်းညွှန်မည့်နောက်ဘားကိုသတ်မှတ်သည်။
Qiwi မှတဆင့်တစ်ဦးကို PayPal အကောင့်ဖွင့်ဖြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အပေါ် Posted 15.09.2019 03.12.2019
အင်တာနက်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည်အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသောခေတ်သစ်ရုရှားအင်တာနက်စီးပွားရေးသမားများသည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကိုသာမကဘဲဖောက်သည်များနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကအမေရိကန်ငွေပေးချေမှုကိုသုံးရုံသာမကစွမ်းရည်လိုအပ်တယ်။
အပေါ် Posted 15.09.2019 10.01.2020
ဒီနေ့မှာမေးလ်မှာဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာသွားမှာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်ဤကိစ္စတွင်ခက်ခဲသောအရာမရှိပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကမည်သူမဆိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏နိယာမကိုရှင်းပြနိုင်ပြီးကူညီနိုင်သည်။
"QIWI" ပိုက်ဆံအိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန် 100% နည်းလမ်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသန်းပေါင်းများစွာကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိ QIWI ငွေပေးချေမှုစနစ်တွင်သင်ရှာနိုင်သည်။ ထိုမျှမကအားလုံးရိုးရှင်းတဲ့မှတ်ပုံတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိနေသော်လည်းအပြုသဘောဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူများအကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်မေးခွန်းမှာ“ ဘယ်လို ...
အပေါ် Posted 15.09.2019 11.01.2020
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏နယ်မြေတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအနက်ခေါင်းဆောင်ကိုပြည်တွင်းစီမံကိန်း Yandex ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီသည်မူရင်းအခွင့်အရေးအတွက်အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေသည်။ ဒီinရိယာထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် ...
အကယ်၍ သင်သည်ဤဝေါဟာရကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှစာသားအတိုင်းပြန်ဆိုပါက“ screamer” ကိုဆိုလိုသည်။ ရှင်းပြချက်ကိုရိုးရှင်းအောင်ကြိုးစားကြပါစို့။ Screamer - ဒါဘာလဲ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီဟာအလားတူဇာတ်လမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတဲ့ဗွီဒီယိုတွေဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး ...
ဘယ်ဟာကပိုကောင်းသလဲ - PS3 သို့မဟုတ် Xbox 360? အဖြေတစ်ခုရှာနေသည်
ကောင်းပြီ, ငါတို့နောက်ဆုံးတော့ပိုက်ဆံအနည်းငယ်စုဆောင်းမိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်ဟောင်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ဂိမ်းစက်ကောင်းတစ်လုံး ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများကို ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
ဂိမ်းထဲမှာအီစတာကြက်ဥ - ကဘာလဲ? Outlast, Minecraft နှင့် GTA-5 ဂိမ်းများဖြင့်အီစတာကြက်ဥ
ဂိမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ဆော့ဝဲများတွင် "အီစတာကြက်ဥ" သည်အီစတာကြက်ဥ၏ဘန်းစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများသည်အထွေထွေအကြောင်းအရာနှင့်မကိုက်ညီပါ၊
Warcraft3များအတွက်အပိုဆောင်းလှုပ်ရှားမှုများ: ရေခဲပလ္လင်။ ဖေါ်ပြချက်
Warcraft3အတွက်နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုများ - Frozen Throne သည်မူရင်းဂိမ်းကိုထွက်ပြီးချက်ချင်းနီးပါးပေါ်လာသည်။ ဆယ်နှစ်အကြာ၌ပင်သူတို့သည်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပရိသတ်များနှင့်ဂိမ်းကုမ္ပဏီများမှဖန်တီးသည်။
"VKontakte" တွင်လူတစ် ဦး အားမည်သို့တားမြစ်မည်နည်း - "အနက်ရောင်စာရင်း" ပြုလုပ်ရန်သင်ယူခြင်း
အပေါ် Posted 15.09.2019 24.12.2019
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ VKontakte ၌လူတစ် ဦး ကိုမည်သို့တားမြစ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်နှင့်စကားပြောမည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ function ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပေးမယ်ဆိုတာကိုသင်နဲ့အတူတွက်ကြည့်ရအောင်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဖုံးလွှမ်းရန်ပိုလိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ...
"USSR အမှတ်တံဆိပ်" - ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းများ
အပေါ် Posted 15.09.2019 20.11.2019
အကယ်၍ သင်သည် Android OS ကိုအသုံးပြုထားသောမိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါကသင်ဂိမ်းများအပါအ ၀ င် application များစွာကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီနေ့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ...
ဘယ်လိုတင်ပြချက်များအတွက် program တစ်ခုဖြစ်သနည်း တင်ပြချက်များအတွက်အစီအစဉ်များဖော်ပြချက်
အပေါ် Posted 15.09.2019 26.11.2019
တင်ဆက်မှုဖန်တီးရန်အတွက်မည်သည့်အစီအစဉ်ဟုခေါ်သည်ကိုမေးသောအခါလူအများစုသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ကျော်ကြားသော PowerPoint အစီအစဉ်နှင့်ဆက်နွှယ်နေမည်မှာသေချာသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအတွက်ဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 949 Next ကို 's Page
75 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,990 စက္ကန့်ကျော် Generate ။